IGolda MV > Imithi
Umuthi uyatholakala ngesimo samathebhulethi ngokukhishwa okuguquliwe: okumhlophe noma okumhlophe nge-tint ephuzi, nxazonke, okuyisicaba, kufakwe i-bevel, ezibhebheni ezinomthamo we-60 mg kunobungozi bokuhlukanisa (umthamo we-30 mg: 10, 20, 30, 40, 50, Ama-60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 200 noma ama-pcs angama-300. Emakotini, enqwaba yamakhadibhodi eyi-1 can, ama-pcs ayi-10. Kumaphakethe okulimaza, ku-amakhadibhodi isqwaba se-10 amaphakethe, ngomthamo 60 mg: 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 84, 90, 100, 120, 125, 140, 150, 180, 250, noma ama-PC ama-pcs angu-300 emathini, ebhokisini lekhadibhodi I-1 can, emaphepheni ama-blister: ama-10 ama-PC., I-Per ibhokisi le-carton pack amaphakethe ama-7, ama-pcs ayi-7., kwibhokisi lebhokisi le-2, 4, 6, 8 noma le-10. Iphakethe ngalinye liqukethe imiyalo yokusebenzisa i-Golda MV).
Ithebhulethi engu-1 iqukethe:
into esebenzayo: gliclazide - 30 noma 60 mg,
izingxenye ezisizayo: i-lactose monohydrate, isitashi se-sodium carboxymethyl (uhlobo C), i-hypromellose 2208, i-colloidal silicon dioxide, i-magnesium stearate.
IGolda MV isidakamizwa somlomo we-hypoglycemic. I-Gliclazide, into yayo esebenzayo, isuselwe ku-sulfonylurea yesizukulwane sesibili. Ihlukaniswa nezidakamizwa ezifanayo ngokubakhona kwendandatho ene-heterocyclic eyi-N enesibopho se-endocyclic. I-Glyclazide ivuselela ukuvikelwa kwe-insulin ngamaseli e-beta ama-islets weLangerhans, anciphisa ukugcwala kweglucose egazini. Ngemuva kweminyaka emibili yokwelashwa, umphumela wokukhulisa ukugcwala kwe-insprandial insulin ne-C-peptide uyaphikelela.
Kanye nomthelela kuma-carbohydrate metabolism, unomphumela we-hemovascular. Kuhlobo lwe-2 isifo sikashukela i-mellitus, i-gliclazide isiza ukubuyisela inani eliphakeme lokuqala le-insulin secretion ekuphenduleni ukungena kweglucose futhi ithuthukise isigaba sesibili se-insulin secretion. Ukuvikelwa kwe-insulin kukhushulwa kakhulu ngemuva kokuthambekela ngenxa yokudla kanye nokuphathwa kwe-glucose.
Imiphumela ye-hemovascular of gliclazide ibonakaliswa ngengozi encishisiwe yokuncipha kwesikejana. Ngokwengxenye kuvimbela ukuhlanganiswa kweplatelet kanye nokunamathela, kunciphisa izinga lokuxakeka kwezinto ezifakwa ku-platelet activation (thromboxane B2, beta-thromboglobulin). Isiza ukwandisa umsebenzi we-izicubu ze-plasminogen activator, kunomthelela ekubuyiselweni komsebenzi we-fibrinolytic we-vascular endothelium.
Ezigulini ezine-glycemic hemoglobin (HbI-A1c) ngaphansi kuka-6.5%, ukusetshenziswa kwe-gliclazide kuhlinzeka ngokulawulwa okukhulu kwe-glycemic, kunciphisa kakhulu izinkinga ezincane zesifo sikashukela esingu-2 no-macro-vascular.
Inhloso ye-gliclazide ngenhloso yokulawulwa kwe-glycemic enzima ifaka ukwandisa umthamo wayo ngokuhambisana nokwelashwa okujwayelekile (noma esikhundleni sayo) ngaphambi kokungeza i-metformin, i-thiazolidinedione derivative, i-alpha-glucosidase inhibitor, i-insulin noma enye i-ejenti ye-hypoglycemic kuyo. Imiphumela yezifundo zemitholampilo ikhombisile ukuthi ngokuqhamuka ngemuva kokusetshenziswa kwe-gliclazide kumthamo wezinsuku ezijwayelekile we-103 mg (umthamo omkhulu - 120 mg) ngokuqhathaniswa nokwelashwa okujwayelekile, ubungozi obungahlekile bokuvama okuhlanganisiwe kwezinkinga ezinkulu ze-macro- ne-microvascular buncishiswe ngu-10%.
Izinzuzo zokulawulwa okukhulu kwe-glycemic ngenkathi uthatha i-Golda MV ifaka ukuncishiswa okuphawulekayo emitholampilo ye-pathologies efana nezinkinga ezinkulu ze-microvascular (ngo-14%), i-nephropathy (ngo-21%), izinkinga zezinso (ngo-11%), i-microalbuminuria (ngo-9%) , macroalbuminuria (30%).
Ngemuva kokuthi i-Golda MV ithathwe ngomlomo, i-glycazide igxile ngokuphelele, izinga layo le-plasma likhuphuka kancane kancane futhi ifinyelele kwithafa ngehora le-6 kuya kwayi-12. Ukudla ngesikhathi esisodwa akuthinti izinga lokutholwa, ukungafani ngakunye akunakwa. I-Gliclazide kumthamo ofinyelela ku-120 mg ibonakala ngobudlelwano obulinganayo phakathi komthamo owemukelwe kanye ne-AUC (indawo engaphansi kwengqamuzana yama-pharmacokinetic curve).
Ukuhlanganisa amaprotheni e-plasma egazi - 95%.
Umthamo wokusatshalaliswa ungamalitha angama-30. Umthamo owodwa we-gliclazide uqinisekisa ukuthi ukunakekelwa kwayo okusebenzayo ku-plasma yegazi kugcinwa isikhathi esingaphezu kwamahora angama-24.
I-Gliclazide yenziwe kakhulu kusibindi. Awekho ama-metabolites asebenzayo ku-plasma yegazi.
Ukuqedwa kwesigamu sempilo kungamahora ayi-12-16.
Igcotshwa ikakhulu ngezinso ngendlela yama-metabolites, angaguquki - ngaphansi kuka-1%.
Ezigulini esezikhulile, izinguquko ezibalulekile kumakhemikhali we-pharmacokinetic azilindelekile.
ukwelashwa kohlobo lwesifo sikashukela sohlobo 2 - uma kungekho mphumela owanele wokulashwa kokudla, ukuvivinya umzimba kanye nokunciphisa umzimba,
ukunqandwa kwezinkinga ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo lwe-2 - kunciphisa ubungozi be-microvascular (retinopathy, nephropathy) kanye ne-macrovascular (myocardial infarction, stroke) pathologies ngokusebenzisa kakhulu i-glycemic control.
Uhlobo 1 sikashukela
isifo sikashukela, ikoma likashukela,
isifo sikashukela sikashukela,
ukwehluleka kakhulu kwezinso,
ukwehluleka kwesibindi okunzima,
Ukwelashwa okufanayo ne-miconazole,
inhlanganisela yokwelapha ne-danazol noma i-phenylbutazone,
ukungabekezelelani kokuzala kwe-lactose, galactosemia, i-glucose-galactose malabsorption,
ukungabekezelelani ngakunye kokutholwa kwe-sulfonylurea, sulfonamides,
hypersensitivity kuzakhi zomuthi.
Izibhebhe zeGolide zeGolide kufanele zisetshenziswe ngokuqapha ezigulini esezikhulile ezinokudla okungajwayelekile kanye / noma okungenakulungiswa, izifo ezinzima zesistimu yezinhliziyo (isifo senhliziyo esibuhlungu se-coronary, i-atherosclerosis ebanga kakhulu, ukuswelakala kwe-carotid arteriossteosis), ukusweleka kwe-glucose-6-phosphate dehydrogenase, renal kanye / noma ukwehluleka kwesibindi, ukungasebenzi kahle kwe-adrenal noma i-pituitary, hypothyroidism, ukwelashwa okuhlala isikhathi eside ngama-glucocorticosteroids (GCS), ukudakwa.
IGolda MV, imiyalo esetshenziswayo: indlela nomthamo
I-Gold MV amaphilisi athathwa ngomlomo, agwinye aphelele (ngaphandle kokuhlafuna), mhlawumbe ngesikhathi sokudla kwasekuseni.
Umthamo wansuku zonke uthathwa kanye futhi kufanele ube ku-30 ​​kuye ku-120 mg.
Awukwazi ukubuyisa ngengozi uphuthelwe umthamo olandelayo kwithamo elilandelayo, uthathe umthamo owandisiwe.
Umthamo we-gliclazide ukhethwa ngawodwana, kucatshangelwa izinga lokugxila koshukela egazini kanye nenkomba ye-HbI-A1c.
Umthamo onconyiwe: umthamo wokuqala ngu-30 mg (ithebhulethi engu-1 I-Gold Gold MV 30 mg noma ithebhulethi engu-Gold MV 60 mg) Uma umthamo okhonjisiwe unikeza ukulawula okwanele kwe-glycemic, khona-ke ingasetshenziswa njengethamo lokugcina. Uma kungekho umphumela owanele womtholampilo ngemuva kwezinsuku ezingama-30 zokwelashwa, umthamo wokuqala uyakhula kancane kancane ekukhuphukeni kwama-30 mg (kuze kufike ku-60, 90, 120 mg). Ezimweni ezihlukile, uma izinga likashukela egazini lingancishanga ngemuva kwezinsuku eziyi-14 zokwelashwa, ungaqhubeka ukhuphule umthamo ezinsukwini eziyi-14 ngemuva kokuqala kokuphatha.
Umthamo omkhulu wansuku zonke yi-120 mg.
Lapho ushintsha ekuthatheni amaphilisi we-glyclazide wokukhishwa ngokushesha ku-80 mg, ukuqala ngamaphilisi wokukhishwa modified kufanele kuqalwe ngomthamo we-30 mg, okuhambisana nokwelashwa ngokulawulwa ngokucophelela kwe-glycemic.
Lapho ushintshela ku-Golda MV nezinye izidakamizwa ze-hypoglycemic, isikhathi soguquko kwesinye isikhathi asidingeki. Umthamo wokuqala we-gliclazide kumathebhulethi wokukhishwa modified kufanele abe ngu-30 mg, ulandelwe yi-titration kuya ngokuhlushwa kwe-glucose egazini.
Uma kuhunyushwa, umthamo kanye nengxenye yempilo yesidakamizwa esedlule se-hypoglycemic kufanele sibhekwe. Uma izinto ezisuselwa ku-sulfonylurea ezinesikhathi sempilo ende zithathelwa indawo, khona-ke wonke ama-hypoglycemic agents angamiswa izinsuku eziningana. Lokhu kuzogwema i-hypoglycemia ngenxa yemiphumela yokwengeza ye-glycoslazide kanye nokutholakala kwe-sulfonylurea.
Ukusetshenziswa kwe-Golda MV kwinhlanganisela yokwelapha ne-alpha-glucosidase inhibitors, i-biguanides noma i-insulin kubonisiwe.
Iziguli esezikhulile (ezingaphezu kuka-65) azidingi ukulungiswa komthamo.
Ngokubekezelela ukwehluleka okulingana kwe-reso, ukulungiswa komthamo akudingeki.
Kunconywa ukusebenzisa umthamo omncane (30 mg) we-gliclazide esebenza isikhathi eside ukwelashwa kweziguli ezisengozini yokuthola i-hypoglycemia, ukudla okungajwayelekile noma okungalinganiselwe, ukuphazamiseka okune-compocrine okungahambi kahle, i-hypothyroidism, izifo ezinzima zesistimu yenhliziyo, isikhathi ngemuva kokusetshenziswa isikhathi eside kanye / noma ukuphathwa ngemithamo ephezulu. glucocorticosteroids (GCS).
Ukusetshenziswa kwe-Golda MV ngaphezu kokudla nokuzivocavoca ukuvimbela ubunzima besifo sikashukela 2 kufanele kuqalwe ngomthamo wama-30 mg. Ukufeza ukulawulwa okukhulu kwe-glycemic kanye namazinga we-Hb okuhlosiweI-A1c umthamo wokuqala ungakhuphuka kancane kancane uye kumthamo omkhulu ka-120 mg ngosuku. Inhloso yesidakamizwa yokulawulwa kwe-glycemic enzima iboniswa ihlanganiswa ne-metformin, i-alpha-glucosidase inhibitor, i-thiazolidinedione derivative, insulin namanye ama-hypoglycemic agents.
Ngokushiywa kokudla okulandelayo noma ukudla okungajwayelekile okujwayelekile, kungavela lezi zimpawu ezilandelayo ze-hypoglycemia: ukukhathala okwandayo, indlala ebabazekayo, ikhanda, ukubambezeleka kokuphendula, isicanucanu, ukuhlanza, ukuncipha kokunciphisa, isiyezi, ubuthakathaka, ukuphazamiseka kokulala, ukuqaqanjelwa, ukuphazamiseka, ukudideka, ukudangala, ukubona okungalungile nokukhuluma, i-paresis, i-aphasia, ukwethuka, ukulahlekelwa ukuzithiba, ukuqonda okulimazayo, umuzwa wokungakwazi ukuzisiza, ukugoba, ukuphefumula okujulile, i-bradycardia, ukudangala, ukozela st, nokulahlekelwa ukwazi, ikhoma (kuhlanganise ebulalayo), adrenergic impendulo - anda ukujuluka, ukukhathazeka, isikhumba clammy yomzimba, tachycardia, kukhuphuke komfutho wegazi (blood pressure), arrhythmia, palpitations, angina pectoris. Imiphumela yocwaningo lwemitholampilo ikhombisa ukuthi lapho usebenzisa umuthi ngenhloso yokulawula kakhulu i-glycemic, i-hypoglycemia yenzeka kaningi kunokulawula okujwayelekile kwe-glycemic. Izimo eziningi ze-hypoglycemia eqenjini elinamandla lokulawula i-glycemic zenzeke ngokumelene nesizinda sokulashwa kwe-insulin.
Ngaphezu kwalokho, ngokumelene nesizinda sokusetshenziswa kwe-Golda MV, imiphumela emibi elandelayo ingaqhamuka:
kusuka emgodini wesisu: ubuhlungu besisu, isicanucanu, ukugabha, uhudo, ukuqunjelwa,
okuvela ezinhlelweni ze-lymphatic kanye nokujikeleza kwegazi: kuyaqabukela - i-thrombocytopenia, i-anemia, i-leukopenia, i-granulocytopenia,
kusuka ohlelweni lwe-hepatobiliary: umsebenzi owengeziwe we-alkaline phosphatase, ACT (aspartate aminotransferase), ALT (alanine aminotransferase), i-hepatitis, i-cholestatic jaundice,
engxenyeni yesitho yombono: ukuphazamiseka okubukwayo okwesikhashana (kaningi ekuqaleni kokwelashwa),
ukusabela kwesikhumba: ukulunywa, ukushesha, ukuqunjelwa kwe-maculopapular, i-urticaria, i-erythema, i-edema ye-Quincke, ukusabela ngobudlova (kufaka phakathi i-Stevens-Johnson syndrome, i-necrolysis enobuthi),
eminye (imiphumela emibi enesimo sokuphuma kokunye kwe-sulfonylurea): i-hemolytic anemia, i-erythrocytopenia, i-agranulocytosis, i-vasculitis ye-allergic, i-pancytopenia, i-hyponatremia, i-jaundice, ukwehluleka kwesibindi okunzima.
Izimpawu: ngokweqile, izimpawu zezimpawu ze-hypoglycemia.
Ukwelashwa: ukumisa izimpawu ezilinganisele ze-hypoglycemia (ngaphandle kwezimpawu zemizwa nokuqwashiswa okungenamizwa), kuyadingeka ukwandisa ukudla okwenziwa nge-carbohydrate, ukunciphisa umthamo weGolda MV kanye / noma ushintshe indlela odla ngayo. Ukuqapha ngokucophelela ukwelashwa kwesimo sesiguli kukhonjisiwe.
Ngokuvela kwezimo ezinzima ze-hypoglycemic (ikhesa, ukweqiwa kanye nokunye ukuphazamiseka kwemvelaphi ye-neurological), kuyadingeka ukungena esibhedlela ngokushesha.
Ukunakekelwa kwezokwelapha okuphuthumayo kwe-hypoglycemic coma noma ukusola kwayo kubandakanya ukufaka umjovo we-intravenous (iv) we-20-30% dextrose (ushukela) ngendlela yomthamo ka-50 ml, kulandele i-iv drip ye-10% dextrose solution, egcina izinga lokuhlushwa kwe-glucose ku igazi ngaphezulu kwe-1 g / l. Ukuqapha ngokucophelela isimo sesiguli nokuqapha ukugxila kweglucose yegazi kufanele kuqhubeke amahora angama-48 alandelayo.
IGolda MV kufanele ichazwe kuphela uma ukudla kwesiguli kufaka phakathi ibhulakufesi, futhi ukondliwa kuvamile. Lokhu kuhlotshaniswa nengozi enkulu yokuthola i-hypoglycemia, kufaka phakathi amafomu anzima futhi ahlala isikhathi eside adinga ukulaliswa esibhedlela kanye ne-iv ukuphathwa kwesixazululo se-dextrose izinsuku eziningana. Ngesikhathi sokudla i-Golda MV, kubaluleke kakhulu ukuthi kuqinisekiswe ukutholwa okwanele kwama-carbohydrate emzimbeni ngokudla. Ukudla okungenamsoco, ukudla okunganele, noma ukudla okungekuhle kwe-carbohydrate kungaholela ku-hypoglycemia. Imvamisa, ukuthuthukiswa kwe-hypoglycemia kubonwa ezigulini ezilandela ukudla okunekhalori ephansi, ngemuva kokuzivocavoca okukhulu ngokomzimba noma isikhathi eside, ukuphuza utshwala, noma lapho ulashwa nabenzeli abaningana be-hypoglycemic ngasikhathi sinye. Imvamisa, ukudla okune-carbohydrate (okubandakanya ushukela) kungasiza ekwehliseni izimpawu ze-hypoglycemia. Kulokhu, izikhala zikashukela azisebenzi. Kufanele kukhunjulwe ukuthi i-hypoglycemia ingaphindeka. Ngakho-ke, uma i-hypoglycemia inesibonakaliso esidaluliwe noma imvelo ende, naphezu kokuphumelela kokudla ukudla okune-carbohydrate, udinga usizo losizo oluphuthumayo oluphuthumayo.
Lapho eqoka i-Golda MV, udokotela kufanele azise isiguli ngokuningiliziwe mayelana nokwelashwa kanye nesidingo sokulandela ngokuqinile i-dosing regimen, ukudla okulinganiselayo kanye nokuzivocavoca umzimba.
Isizathu sokukhula kwe-hypoglycemia ukungakwazi noma ukungathandi kwesiguli (ikakhulukazi ekhulile) ukulandela izincomo zikadokotela futhi zilawule ngokuhlelekile amazinga kashukela wegazi, ukungondleki okwanele, ushintsho ekudleni, ukweqa ukudla noma indlala, ukungalingani phakathi kokuzivocavoca umzimba kanye nenani lama-carbohydrate athathwe, ukwehluleka kwesibindi okukhulu , ukwehluleka kwezinso, ukweqisa izidakamizwa, ukungabi namandla kokugula kanye / noma isifo se-thyroid.
Ngaphezu kwalokho, i-hypoglycemia ingadala ukusebenzisana kwe-gliclazide nezidakamizwa ze-concomitant therapy. Ngakho-ke, isiguli kufanele sivumelane nanoma yimuphi udokotela ngokuthatha noma yisiphi isidakamizwa.
Lapho eqoka i-Golda MV, udokotela kufanele azise isiguli namalungu omndeni wakhe ngokuningiliziwe ngobungozi obukhona nezinzuzo zokwelashwa okuzayo, izimbangela nezimpawu ze-hypoglycemia, ukubaluleka kokulandela ukudla okunconyiwe kanye nesethi yokuzivocavoca umzimba, ukwenzeka kokuzihlola njalo kwamazinga eglucose wegazi.
Ukuze uhlole ukulawulwa kwe-glycemic, i-Hb kufanele ilinganiswe njalo.I-Alc.
Kufanele kukhunjulwe ukuthi ngokuhluleka okubangelwa yi-hepatic kanye / noma ukwehluleka kakhulu kwe-renal, isimo se-hypoglycemia singakhula isikhathi eside futhi sidinga ukwelashwa okufanele ngaso leso sikhathi.
Ukulawulwa kwe-glycemic okutholakele kungahle kube buthaka ngokuvela komkhuhlane, izifo ezithathelwanayo, ukulimala noma ukungenelela okubanzi kokuhlinzwa. Kulezi zimo, kungcono ukuthi udlulisele isiguli ekwelashweni nge-insulin.
Ukuntuleka kokusebenza kwe-gliclazide ngemuva kwesikhathi eside sokwelashwa kungenzeka ngenxa yokumelana nomuthi wesibili, okuwumphumela wokuqhubeka kwesifo noma ukuncipha kokuphendula komtholampilo umuthi. Lapho kuthola ukumelana kwezidakamizwa kwesibili, kuyadingeka ukuthi uqinisekise ukuthi isiguli sinamathela ekudleni okunqunyiwe futhi sihlole nokwanela umthamo we-Golda MV othathwe ngawo.
Ngokushoda kwe-glucose-6-phosphate dehydrogenase, ukusetshenziswa kwe-sulfonylurea derivatives kwandisa ingozi ye-hemolytic anemia. Ngakho-ke, ekwelashweni kweziguli ezine-glucose-6-phosphate dehydrogenase defence, ama-hypoglycemic agents elinye iqembu kufanele akhethwe.
i-miconazole: Ukuphathwa ngokuhlelekile kwe-miconazole noma ukusetshenziswa kwayo ngendlela yejeli emsipheni womlomo kubangela ukwanda komphumela we-hypoglycemic we-gliclazide, ongadala ukukhula kwe-hypoglycemia kuze kufike ku-coma,
i-phenylbutazone: inhlanganisela enezindlela zomlomo ze-phenylbutazone ithuthukisa umphumela we-Goldoglycemic we-Golda MV, ngakho-ke, uma kungenzeki ukunquma omunye umuthi olwa nokuvuvukala, kuyadingeka ukulungisa umthamo we-glyclazide zombili ngesikhathi sokuphathwa kwe-phenylbutazone nangemva kokuhoxiswa kwayo,
I-ethanol: ukusetshenziswa kophuzo oludakayo noma izidakamizwa eziqukethe i-ethanol kuvimbela ukusabela okunciphisayo, okungaholela ekwandiseni i-hypoglycemia noma ukuthuthukiswa kwe-hypoglycemic coma,
amanye ama-hypoglycemic agents (insulin, acarbose, metformin, thiazolidinediones, dipeptidyl peptidase-4 inhibitors, glucagon-like peptide-1 receptor agonists), beta-blockers, fluconazole, angiotensin converting enzyme inhibitors (blocking agents, enaprilap)2Ama-receptors ama-histamine, ama-monoamine oxidase inhibitors, i-sulfonamides, i -cacithromycin, izidakamizwa ezingezona ze-steroidal ezilwa nokuvuvukala: ukuhlanganiswa kwalezi zidakamizwa nge-glycazide kuhambisana nokwanda kwesenzo se-Golda MV kanye nengozi eyengeziwe ye-hypoglycemia,
danazol: umphumela we-diabetogenic we-danazol usiza ukwenza buthaka umphumela we-gliclazide,
I-chlorpromazine: imithamo ephezulu yansuku zonke (engaphezu kwe-100 mg) ye-chlorpromazine inciphisa ukuvikelwa kwe-insulin, okufaka isandla ekwandeni kokuhlushwa kweglue glucose. Ngakho-ke, nge-conpsitant antipsychotic therapy, ukukhethwa komthamo we-gliclazide nokulawulwa ngokucophelela kwe-glycemic, kufaka phakathi ukuhoxiswa kwe-chlorpromazine, kuyadingeka,
i-tetracosactide, i-GCS yokusetshenziswa okuhleliwe kanye ne-topical: ukunciphisa ukubekezelelwa kwe-carbohydrate, okufaka isandla ekwandeni kwe-glycemia kanye nengozi yokukhula ketoacidosis. Ukuqapha ngokucophelela kwamazinga kashukela egazini kuyadingeka, ikakhulukazi ekuqaleni kokwelashwa okuhlangene, uma kunesidingo, ukulungiswa kwamthamo kwe-gliclazide,
i-ritodrin, i-salbutamol, i-terbutaline (iv): kufanele kwaziwe ukuthi i-beta2-adrenomimetics yenyusa izinga le-glucose egazini, ngakho-ke, uma ihlanganiswa nabo, iziguli zidinga ukuzithiba okujwayelekile kwe-glycemic, kungenzeka ukudlulisa isiguli ukwelashwa kwe-insulin,
ama-warfarin namanye ama-anticoagulants: i-gliclazide ingaba nomthelela ekwandeni okukhulu ngokomtholampilo emiphumeleni yama-anticoagulants.
Ama-Analogs weGolda MV yilezi: Diabetesalong, Glidiab, Gliclada, Gliclazide Canon, Gliclazide MV, Gliclazide-SZ, Gliclazide-Akos, Diabeteson MB, UDikinax, Diabefarm, Diabefarm MV, njll.
Ukubuyekezwa mayelana neGolide MV
Ukubuyekezwa mayelana neGolide MV kuyimpikiswano. Iziguli (noma izihlobo zazo) zibonisa impumelelo esheshayo yokunciphisa ushukela ngokwanele ngenkathi uthatha umuthi, kuyilapho kunengozi eyandayo ye-hypoglycemia neminye imiphumela emibi. Ngaphezu kwalokho, ukuba khona kwe-contraindication kubhekwa njengokubi.
Ngesikhathi sokuphathwa kweGolda MV, kunconywa ukuthi uqaphele ngokuqinile ukudla okudliwayo nokudla, ukulawula nsuku zonke ushukela wegazi.
Ungawenza kanjani ngokwejwayelekile ushukela wegazi: izinsiza ekwehliseni ushukela
Izinzwane ziyaqina? Lokhu kungaba wuphawu lokuqala lokugula okungathi sína.
Ungayisebenzisa kanjani isidakamizwa i-Amoxil?
Ilihlo lihlahlela isifo sikashukela
I-Glucometer Accu Check: isetshenziswa kanjani, izibuyekezo
Kuzokwenzekani ngemuva kokususwa kwe-adenoma ye-pituitary
Ukubuyiselwa emuva kokususwa kwe-adenoma ye-pituitary: kanjani ukunciphisa imiphumela? I-pituitary gland iyisitho sohlelo lwe-endocrine ekhiqiza ama-hormone angena egazini. Inesimo sokusaqanda futhi itholakala "esihlalweni sobukhosi saseTurkey" enkabeni yenhloko. ...
Ingabe ushukela ophezulu wegazi uyingozi?
Ungasisebenzisa kanjani isidakamizwa Liprimar 10?
I-Meldonium: imiyalo esetshenziswayo, izinkomba zokusebenzisa i-bonolo
Umlenze uphuthuma, unyawo lwesifo sikashukelaUkuxilongaI-Dummy DiabetesicsIsifo sikashukelaIzinhlobo NezinhloboIsifo sikashukelaInsulinIsifo Sikashukela: Ulwazi olubalulekileIzinkinga zesifo sikashukelaImikhiqizo yabanesifo sikashukela
Yini ongayidla ngesifo sikashukela: imithetho kanye nemigomo yokudla okunempilo, nokuthi yini i-GI
Umshini ulinganisa ushukela wegazi njengoba ebizwa kanjalo
Amamitha kashukela egazi, 2018
Kungenzeka yini ukuthi udle ushizi wekhishi nge-cholesterol ephezulu?
Yiluphi ushukela wegazi obhekwa njengento evamile enganeni?
Kungenzeka yini ngesifo sikashukela ukudla isinkwa se-rye
Kungenzeka yini ukuthi wehlise ushukela wegazi ngokushesha nokuthi yini engenziwa ekhaya ukwehlisa izinga layo?